Tababarkii Tababarayaasha Hogaaminta Sare Oo Maanta Si Guud U Soo Gabagaboobay. - Cakaara News
Tababarkii Tababarayaasha Hogaaminta Sare Oo Maanta Si Guud U Soo Gabagaboobay.
Adama(CN) Talaado.Dec.30.2014, barnaamijkan tababarka hogaaminta sare ee qorshaha iyo istaraatijiyada doorashada 5aad ee dalka iyo deeganada ayaa socday muddo 3 cisho ah waxaana soo diyaariyay xafiiska EPRDF kaasoo ay kasoo qayb galeen madaxda sare ee dalka iyo deegaanada oo ay kamid ahaayeen r/wasaare kuxigeenka dalka, wasiirada federaalka, madaxwaynaha DDSI, siddeeda madaxwayne ee deegaanada iyo masuuliyiin kasocotay deegaanada.
Tababarkan tababarayaasha hogaaminta sare ee qorshayaasha doorashada iyo xaaladaha ay marayaan xisbiyada talada haya ayaa ah mid ahmiyad wayn u leh dalka iyo sidii ay doorasho nabadgalyo oo cadaalad ah ay uga dhici lahayd wadanka guud ahaan iyo deegaanadaba.
Guud ahaan barnaamijkan ayaa waxaa kasoo baxay in EPRDF uu yahay xisbi shaqo qabtay yahayna xisbi shacabka lahortagi kara oo kalsooni ka qaba. Tababarkan oo xubnihii hogaaminta deegaanka ee ESPDP khibrad badan siin doona ayaa lagaga hadlay arimo badan oo doorashooyinka iyo mustaqbalka xisbigaba ah waxaana si kooxa kooxa ah looga dooday xaaladaha xisbiga iyo khibradaha laga bartay doorashooyinkii hore ee dalka soo maray.
Xubnihii hogaaminta sare ee DDSI oo ay ugu horeeyaan madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, gudoomiyaha xisbiga ahna afhayeenka mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo masuuliyiin sare ayaa firfircooni kamuujiyay doodihii iyo talooyinkii xisbinimo oo laga hadlayay.
XDSHSI ayaa lagu amaanay guulaha iyo isbadalada uu xisbigu kasoo hoyiyay nabadgalyada, horumarka, xidhiidhka dadwaynaha, doorka maamulka ee dhalinyarada, deegaankii ugu horeeyay ee ay gabadh dumar ah madaxwayne kuxigeen kanoqoto iyo amaano looga soo jeediyay wasaarada arimaha dibada.
Moyorka magaalada Adama iyo xisbiga talada haya ee deegaanka Oromada ayaa xaflad balaadhan oo lagu maamuusayay xidhitaanka barnaamijkan ugu qabtay hogaamintii sare ee maalmahan tababarku uga socday magaaladaasi. Waxaana abaal marin gooni ah la gudoon siiyay XDSHSI oo uu gudoomay afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq.
Waxaa kale oo tababarka kamid ahaa xulashada xubnaha baarlamanka oo dhowr iyo toban qodob ka koobnaa, waxaana kamid ahaa qodobadaasi 1) gudashada waajibaadka shaqo, 2) in uusan waligii kooxaysi xisbiga dhexdiisa ah iyo qabiilba uusan kudhaqmin, 3) in habayaraatee uusan waligii urur nabadiid ah soo marin, 4) in uu yahay qof leh aragti shacab iyo mid horumar, 5) aqoontiisa ugu yaraan Degree, 6) natiijo wax ku'ool ah kasoo hoyiyay shaqooyinka n/galyada, horumarka, maamulka suuban, anshaxa iyo xidhiidhka dadwaynaha. Shuruudahaas iyo kuwo kale oo aan dib idiin kasoo sheegi doono ayaa kamid ahaa sida lasheegay in lagu go'aaminayo xulashada xubnaha musharixiinta.
XDSHSI oo dhinacyo badan lagu amaanay ayaa go'aaminaya in xubnaha baarlamanka boqolkiiba 30 ilaa 50 laga dhigo dumar iyadoo ay xubnuhu kukala duwanyihiin 30, 35, 40 iyo 50 boqolkiiba in lagdhigo dumar walow loo badan yahay 30 ilaa 40. Go'aankan ayaa ah mid wali horyaala xisbga. Sikastaba ha ahaatee haweenka baarlamanka ee deegaanka ayaa ahaan jiray labo ilaa 3 xubnood halka wakhtigan lagu doodayo ugu yaraan 30 ilaa 40 boqolkiiba.
Dhinaca kale xubnaha baarlamanka federaalka waxaa loo egayaa aqoonta ugu yaraan Master iyadoo hada kahor laga qayb galin jiray xooladhaqatada ayaa waxaa sanadkan xooga lasaaray aqoonta. Xildhibaanada deegaanka ee heer federaal ayaa iyagu muujiyay shaqooyin aad u wanaagsan taasoo iyadu tix galin gaar ah noqon doonta.
Sida aan xogo hoose ku helnay waxaa suuro-gal ah doorashada sanadkan 2007-da T.I. shuruudaha xulashada musharixiinta in ay calaamad su'aal gaar ah saaraan doonto xubnaha laba jeer iyo wax kabadan loo soo doortay in aan lasharixin marka laga reebo xubnaha uu xisbigu u arko in ay mudanyihiin tix galin gaar ah iyo waayo aragnimada ay leeyihiin.
Isku soo wada duuboo barnaamijkan tababarka oo xanbaarsanaa macluumaad badan islamarkaana kor u qaadaya garaadka siyaasadeed ayay hogaamintan sare u dhaadhicin doontaa muwaaqirada iyo qaab dhismeedka hogaaminta dhexe ilaa hogaaminta ugu hoosaysa.